I-Drugstore Archive - iSearch
Vele udilize. Vumela ingqondo yakho igijime. Ukuze kutholakale kalula futhi akukho muntu. Akudingeki nokuba kube yeholide langempela lokuphila kahle. Ukuthatha ikhefu empilweni yansuku zonke njalo manje kungenza okuningi ukwandisa inhlalakahle yomuntu siqu. Futhi ngemikhiqizo yokunakekelwa okufanele, ikhefu elincane liyisipiliyoni esihle-somzimba nomphefumulo.
Siphila esikhathini esibucayi, sihlale sitholakala futhi sisebenza ngaphansi kwamandla. Njengoba kubalulekile ukuphuma empilweni yansuku zonke njalo njalo nokuzicabangela wena. Izidakamizwa zisinikeza imikhiqizo ehlukene ehlukahlukene okufanele ifuthe kahle impilo yethu. Imboni yezempilo nenhle ikhula. Amadoda abuye abe nomdlandla ngokwengeziwe ngemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba kanye nokwelashwa kwe-spa: Ngaphandle kwama-anti-wrinkle creams nemikhiqizo yokwenza izinwele, imikhiqizo yokunakekela intshebe yemikhiqizo nemishini isanda kuthuthukiswa. Kodwa kungani kubaluleke kangaka ukulalela izithako eziwusizo ekunakekeleni komzimba nenyama?
impilo isearch - Okthoba 8, 2017 0
Ukulinganisa ngokuthepha I-massage yokushaya ingenye yezindlela zokuqinisa umzimba kakhulu. Kushukumisa ukuhamba kwegazi futhi kusiza ekuqabuleni ukungezwani kwemisipha. Ngokufanayo, iyasebenza ekulinganiseni ukukhathazeka okucishe kube munxa, ...
Izimonyo nokuhlanzeka isearch - Okthoba 6, 2017 0
Isinqe sentshebe kumele sibe nayo - akunandaba uma izinsuku ezintathu intshebe noma nentshebe ephelele Isilevu ngumkhuba oqhubeka unyaka wonke futhi ugqokwa ngabesilisa ...
Izimonyo nokuhlanzeka isearch - September 23, 2017 0
I-Electric Sonic Toothbrush kumele ibe namazinyo amahle Ukuxubha kuyingxenye yempilo yansuku zonke, kepha - thembeka - uvame kangaki ukuxubha ...
impilo isearch - September 14, 2017 0
Ukwelashwa okusebenzayo kwekhampasi lokuphefumula nge-inhaler ephelele Abantu abaningi bakhala ngokungakhululeki lapho uphefumula futhi ipheshana lokuphefumula elingaphezulu lingazwela ngosizo lwe-inhaler ...